Maxkamada ICC oo dooneysa in ay dhagaysato dacwada Madaxweynihii hore ee Sudan - Home somali news leader
Europe’s death toll in Covid-19 exceeds one million as cases continue…
Home NEWS Maxkamada ICC oo dooneysa in ay dhagaysato dacwada Madaxweynihii hore ee Sudan
Maxkamada ICC oo dooneysa in ay dhagaysato dacwada Madaxweynihii hore ee Sudan
Wafdi ka socda Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa gaaray dalka Suudaan si mas’uuliyiinta dalkaasi ay ugala hadlaan sidii loo maxkamadeyn lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Al-Bashiir.
Al-Bashiir waxaa in muddo ah raadineysay Maxkamadda Caalamiga ah Dambiyada ee ICC, iyadoo loo heysto xasuuq, dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha.
Ra’iisalwasaaraha Suudaan ayaa sheegay in wafdigani uu joogi doono dalka ilaa 21 Oktoobar, si ay uga wada arrinsadaan “iskaashi” laga sameeyo arrinta Cumar Al-Bashiir.
Dowladda Suudaan ayaa horey u ogolaatay in Al-Bashiir lagu maxkamadeyn karo magaalada Hague.
Wafuudda ka socota maxkamadda ICC ee hada ku sugan magaalada Khartuum ayaa waxaa ka mid ah dacwad oogaha maxkamaddaasi Fatou Bensouda. Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in qiyaastii 300,000 oo qof lagu dilay dagaalada, kuwaa oo billowday kaddib kacdoon ka dhacay Daarfuur sanadkii 2003.
Maxkamadda ICC-da ayaa sidoo kale laba sarkaal oo hore oo kala ah Axmed Haruun iyo Cabdulraxiim Maxamed Xuseen, ku eedeysay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha, kuwaa oo la sheegay in ay ka geysteen isla gobolkaasi Daarfuur.
Al-Bashiir oo 76 jir ah ayaa sannadkii hore xilka laga tuuray kaddib mudaaharaadyo waawayn oo dalkaasi ka dhacay. Dowlad kumeel gaar ah ayaa hadda ka talisa Suudaan, taa oo ku timid heshiis seddex sano ah oo ay wada galeen hoggaamiyaasha rayidka iyo militariga ugu sareeya dalkaasi.
Hoggaamiyehaasi hore ee Suudaan ayaa horay loogu xukumay eedeymo la xiriira musuqmaasuq. Isaga iyo 27 sarkaal oo kale ayaa haatan maxkamad ku taal magaalada Khartuum waxay waddaa dhaegsyiga dacwad la xiriirto afgembigii 1989 ee uu Al-Bashiir xukunka ku qabsaday. Haddii lagu helo dambigaasi, dhammaantood waxay la kulmi karaan ciqaab dil ah.
Al-Bashiir ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyay. Horraantii sanadkan ayaa mid ka mid ah qareennadiisa waxa uu sheegay in Al-Bashiir iyo eedeysanayaasha kale ay wajahayaan “dacwad siyaasadeysan”
Previous articleCiidamo la wareegay xarunta wasaarada kalluumeysiga Puntland
Next articleHakad ku yimid diyaaradihii tegi jirey magaalada Beledweyne